Bihani Post – Bihani Post
Home / Bihani Post
4 hours ago	रोचक खबर 0
श्रीमान र श्रीमतीले सँगै बाँच्ने र सँगै मर्ने कसम खाएका हुन्छन् । जीवनभर सँगसँगै भएका श्रीमान र श्रीमतीको एकैसाथ मृत्यु भएको र सँगसँगै शव उठाएको घटना बिरलै पाइन्छ । धर्म र असल कर्म गर्नेहरुलाई यस्तो संयोग जुर्छ भन्ने भनाई पनि नेपाली समाजमा छ । पर्वतको बाजुङमा भने विरलै पर्ने यस्तो …
4 hours ago	समाचार 0
काठमाडौँ। सरकारी निकाय र निर्माण व्यवसायीले इमान्दार भएर काम गरे ठूला विकास निर्माणका कामले गति लिन सक्छ भन्ने उदाहरण नयाँ वर्ष लागेपछि निरन्तर रुपमा सार्वजनिक भएका छन्। यस मुलुकमा केही भएकै छैन, मात्र भ्रष्टाचार भएको छ, सरकार पूरै असफल भएको छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु गफ मात्रै दिन्छन् भन्नेका लागि विकासका …
5 hours ago	भिडियो 0
नेपालमा भ्रष्टाचार कहाँ छैन ? शहरदेखि गाउँसम्म जताततै भ्रष्टाचार छ । राज्यका हरेक निकायमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । प्रधानमन्त्रीले हरेक भाषणमा भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनसिलताको शव्द छुटाउँदैनन् । तर, सरकारको व्यवहारले त्यो देखाइरहेको छैन । राजनितिक नेतृत्वबाटै हुने भ्रष्टाचार झन् बिकराल छ । शक्तीको दुरुपयोग गरि भुमाफियालाई संरक्षण दिँदै सरकारी …
6 hours ago	राशिफल 0
श्री शाके १९४१ बि.स. २०७६ साल बैशाख ६ गते शुक्रबार इश्वी सन् २०१९ अप्रिल १९ तारीख चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथी चित्रा नक्षत्र हर्षण योग भद्रा करण चन्द्रमा कन्या राशिमा ०८ः३७ बजे सम्म पश्चात तुला राशिमा आनन्दादि योगमा मुसल योग सुर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु बालाजु बाईसधारा मेला, हनुमान जयन्ती, पूर्णिमा …
काठमाडौं । आज विप्लव समुहले गरेको बन्दले देशैभरीको जनजीवन प्रभावित भएको छ । प्रतिबन्धित विप्लव समूहले आह्वान गरेको नेपाल बन्दका दिन आज मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिकामा तर्साउनका लागि बनाइएको नक्कली कुकर बम राखिएको फेला परेको छ । आज बिहान सुन्दरहरैचा नगरपालिका– ७ स्थित बेलगाछीमा नक्कली कुकर बम राखिएको फेला परेको छ …
पोखरामा बम डिस्पोज गर्दै गर्दा नेपाली सेनाका नायक घाइते, उनका हातका औला चुडिएका छन्
1 day ago	Braking News 0
पोखराको नदीपुर स्थित प्रदेशसभा भवन गट अगाडी सडकमा भेटिएको शंकास्पद बस्तु डिस्पोज गर्ने क्रममा एक नेपाली सेनाका नायक धर्मबहादुर थापा घाइते भएका छन् । डिस्पोज गर्ने तयारी गर्दै गर्दा नेपाली सेना कै बारुद पड्किदा थापा घाइते भएका हुन् । उनको हातका औलाहरु चुडिएका छन् । नदी पुरमा कागजको डल्लो बेरेर …
पाल्पा – आज बिहानै पाल्पामा सुतली बम विस्फोट भएको छ । जिल्लाको रिब्दिकोट गाउँपालिका–३ खस्यौलीमा रहेको गाउँपालिका भवनमा बम पड्किएको हो । बमले गाउँपालिका भवनमा क्षति पुगेको छ । भर्खरै भएको बम विस्फोटपछि प्रहरीको टोली त्यसतर्फ लागेको जनाइएको छ । बम विप्लव समूहको नेकपाकाले पड्काएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । …
दुखद खबर : हावाहुरीले मच्चायो फेरी बितण्ड, ३१ जनाको मृत्यु, नेपालमा पुरै सर्तक रहन आग्रह
1 day ago	सूचना 0
एजेन्सी । वर्षासँगै आएको हावाहुरीले भारतमा ३१ जनाको ज्यान गएको छ । मंगलबार विभिन्न राज्यमा आएको वर्षा र चट्याङसहितको हावाहुरीबाट ३१ जनाको ज्यान गएको हो । मध्यप्रदेशमा १६, राजस्थान ६ र गुजरातमा ९ जनाको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । हावाहुरीमा परी दर्जनौं मानिस घाइते भएका छन् । …
काठमाडौं । नेपालगन्जमा १९ बर्षीय स्वस्तिका लिम्बूको रहस्यमय तरिकाले हत्या भएको छ । ६ महिनाअघि नेपालगन्ज भृकुटी चोकका आशिश बुढा क्षेत्रीसँग प्रेम बिवाह गरेकी लिम्बुको रहस्यमय तरिकाले हत्या भएको हो । स्वस्तिका श्रीमान स्वस्तिकासँग नेपालगंज उपाहमनगरपालिका-१० भृकुटि चोकमा बस्दै आएका थिए । आइतबार दिउँसो स्वस्तिकाकाे शव आफ्नै कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा …
]श्री शाके १९४१ बि.स. २०७६ साल बैशाख ५ गते बिहिबार इश्वी सन् २०१९ अप्रिल १८ तारीख चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथी हस्ता नक्षत्र व्याघात योग गर करण चन्द्रमा कन्या राशिमा आनन्दादि योगमा राक्षस योग सुर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु भ.पु. भैरव(भद्रकाली यात्रा, विश्वसम्पदा दिवस –ज्योपं. सरोज घिमिरे/धनकुटा खबर । मेष राशि …